Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity anodzidudzira date yepamusoro uye zvakabudiswa zvinetso vakaparadzira mashoko muunganidzwa.
Websites akadai Flickr uye Facebook vanhu vakwanise kugoverana mifananidzo neshamwari dzavo uye nemhuri, asi naivo kusika hombe repositories pamusoro mapikicha anogona kushandiswa zvimwe zvinangwa. Somuenzaniso, Agarwal et al. (2011) oedza kushandisa mapikicha aya "Vaka Roma ari Day" nokushandisa 150,000 mifananidzo Roma kuumba 3D vavakezve guta. Nokuti nzvimbo dzinoshanyirwa akafanana Coliseum maiva mifananidzo zvakakwana paIndaneti kubudisa 3D mienzaniso (Figure 5.10), asi kunaka pazvinhu izvi vakanga shoma ndechokuti mapikicha vakawanda vakatorwa kubva chete iconic kumaonero, vachisiya zvikamu zvivako unphotographed. Uyezve, nokuti nzvimbo dzakawanda muguta, mapikicha kwete zvakakwana aiwanika. Saka, achishandisa akawana mashoko kubva Photo repositories, zvakanga zvisingaiti kuti recreate zvose neRoma. Asi, zvakadini kana vazvipira yaigona wechi kuunganidza zvinodiwa mapikicha zvechokwadi "Vaka Rome mune Day"?
Figure 5.10: A 3-D vavakezve Coliseum kubva hombe akagadzirwa 2-D mifananidzo kubva chirongwa "Building Rome mune Day". The zvokuridza dzinomirira nzvimbo umo mifananidzo vakatorwa (Agarwal et al. 2011) .
Kuti dzinoita nangananga muunganidzwa vakawanda mapikicha, Kathleen Tuite uye nevamwe yakatanga PhotoCity, pikicha-uchiisa mutambo. Imwe tsvarakadenga chine chokuita PhotoCity ndechokuti akashandura vanokwanisa basa rakaoma date muunganidzwa-uchiisa mapikicha-rive mutambo-kufanana kunosanganisira zvikwata, nematende, uye mireza (Figure 5.11). Magadzirirwe PhotoCity uyewo Washington anodzidudzira zvakabudiswa uye mashoko unhu nematambudziko eBird nevamwe vakaparadzira mashoko muunganidzwa zvirongwa.
Figure 5.11: PhotoCity akashandura vanokwanisa basa rakaoma wokuunganidza mashoko (kureva, uchiisa mapikicha) uye akafunga kuita mutambo (Tuite et al. 2011) .
PhotoCity yakatanga kutumirwa kuti vakwanise kuva 3D rokuvakazve mumayunivhesiti zviviri: Cornell University uye University of Washington. Vatambi nechimwe kembasi aigona aongorore mamiriro vavakezve muenzaniso kembasi yavo. Zvadaro, vaigona kuwana pfungwa kuburikidza uchiisa mifananidzo kuti akudziridze muenzaniso ano. Somuenzaniso, kana ari muenzaniso kwazvino Uris Library (pana Cornell) raiva patchy chaizvo, imwe mutambi aigona kuwana pfungwa kuburikidza uchiisa mapikicha matsva payo. Achitsoropodza, mifananidzo vakanga uploaded vanofanira bindepinde pamwe yaivapo mapikicha kuitira kuti dzikwanise yakasimbiswa, uye uwandu pfungwa imwe mutambi akapiwa inobva mari Photo kwavo kunowedzera muenzaniso ano. Pakupedzisira, vaongorori vaigona kushandisa izvi uploaded mapikicha kusika yakakwirira chisarudzo 3D yokutevedzera zvezvivako zvose pazvikoro (Figure 5.12).
Figure 5.12: The PhotoCity mutambo kuti vatsvakurudzi uye vatori vechikamu kuti kusika yepamusoro 3D yokutevedzera zvezvivako vachishandisa mifananidzo uploaded kuburikidza vechikamu (Tuite et al. 2011) .
Magadzirirwe PhotoCity Washington anogadziriswa matambudziko maviri: date chivimbo chakasimba uye zvakabudiswa. Chokutanga, mapikicha vakanga yakasimbiswa kuburikidza chienderane navo pamusoro yapfuura mapikicha dzaiva jana vachiwirirana kuna yapfuura mapikicha yose nzira kudzokera mbeu mapikicha vakanga uploaded kubudikidza nevatsvakurudzi. Nemamwe mashoko, nokuti redundancy ichi yakavakwa-mukati, zvakaoma chaizvo kuti hurongwa kugamuchira mashoko akaipa. Chechipiri, scoring hurongwa muropa inodzidzisa vatori kuunganidza chinokosha kwete vakawanda zvikuru kureruke-mashoko. Kutaura zvazviri, hezvino zvimwe nzira kuti vatambi akarondedzera kushandisa kuti awedzere pfungwa, izvo yakaenzana nekunhonga Data kukosha (Tuite et al. 2011) :
"[Ndakaedza] paiva nguva zuva uye chiedza kuti mapikicha akatorwa; izvi zvaizobatsira kudzivisa Kurambwa mutambo. With vakati ramakore mazuva aiva akanakisisa nokure kana pakugadzirisa makona nokuti zvishoma musiyano yakabatsira mutambo mufananidzo kunze geometry kubva mifananidzo angu. "
"Kana kwaive, Ini kushandiswa kamera wangu Anti-kuzungura zvinhu kubvumira pachangu kutora mapikicha apo famba imwe wongoramba. Izvi akabvumira nditore Crisp mapikicha apo vasina kurega stride wangu. Uyewo bhonasi: shoma vanhu zvavakaramba ini "!
"Kutora mifananidzo chimwe chivako vakawanda 5 megapixel kamera, ipapo kuuya kumba pasi, dzimwe nguva kusvika 5 s pakupera kwevhiki davi, akanga chikuru Photo kubatwa nzira. Kuronga mapikicha ari zvokunze zvakaoma ngarurege folders kubudikidza kembasi nharaunda, kuvaka, ipapo pachiso chivakwa akapa vakuru zvakanaka maumbirwo Uploads. "
Mashoko aya kubva vechikamu inoratidza kuti kana vari inopiwa zvakakodzera inofambiswa, vanogona kuva zvikuru nyanzvi pane nekunhonga mashoko dzinofarirwa nevaongorori.
Yose zvayo, nyika PhotoCity chirongwa rinoratidza kuti zvakabudiswa uye date unhu havasi matambudziko sezvisingakundiki ari kuparadzirwa date muunganidzwa. Uyezve, zvinoratidza kuti zvakaparadzira mashoko muunganidzwa zvirongwa hakugumiri mabasa kuti vanhu vari kutoita zvakadaro, akadai kuona shiri. With rworudyi design, vazvipiri vangakurudzirwa kuita zvimwe zvinhu zvakare.